Global Voices teny Malagasy » Miandry ny Fanisam-bato Farany i Aostralia Raha Mifotitra amin’ny Praiminisitra ‘Fizza’ ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Jolay 2016 16:01 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rennie Nandika miora
Nitsidika an'i Indonezia i Malcolm Turnbull tamin'ny Novambra 2015. Sary an'ilay mpampiasa Flickr : Masoivoho Aostraliana ao Jakarta (CC BY 2.0)
Mety hiandry ela i Aostralia sy ny Praiminisitra, Malcolm Turnbull, vao hahafantatra ny vokatry ny fifidianana federaly natao tamin'ny 2 Jolay 2016. Nisolo ny Praiminisitra teo aloha, Tony Abbott, i Turnbull tamin'ny Septambra 2015 taorian'ny fanonganam-panjakana nataon'ny Antoko  Liberaly. Tokony hahafahany mandresy mora foana amin'ny fifidianana manaraka ny lazany tamin'izany fotoana izany.
Kanefa, ny fanisam-bato natao ny Sabotsy alina dia tsy ahafahana milaza mazava na ny governemanta na ny mpanohitra no nahazo ny maro an'isa tao amin'ny Antenimeram-Pirenena. Ny fifidianana ireo kandidà maro avy amin'ny antoko madinika sy tsy miankina dia midika fa mety hisy parlemanta tsy manana maro an'isa, ary tsy hanana ny maro an'isa na ny ankilany na ny andaniny. Seza enina amby fito-polo amin'ireo 150 no ilaina ahafahana mitondra. Tsy maintsy mahazo ny fitokisan'ny Antenimiera ny praiminisitra, izay hananganana ny governemanta miorina amin'ny rafitr'i Westminster .
I Turnbull no niantso fifidianana mialoha ny fotoana, nefa toa nifototra tany aminy ihany izany fanapahan-kevitra izany. Namerina indray ny fipoiran'ireo fampitoviana an'i Turnbull amin'ny “Fizza” (mampanantena tsy misy) ny mediam-bahoaka — mampitaha azy amin'ny tsipoapoaka mena lehibe iray izay mitsifotra fotsiny, tsy mahavita mitana ny toky nomeny.
Noho ny endrik'i Turnbull omaly alina sy nandritra ny fampielezan-kevitra #ausvotes , mpaminany izay rehetra niaraka tamin'i Fizza LAOLINA!
Sarotra ny fanisam-bato noho ny toe-javatra maro, izay ny sasany dia izao vao nitranga tany Aostralia. Voalohany, ny kandidà iray dia tsy maintsy mahazo mihoatra ny 50% vao mahazo seza ao amin'ny Antenimiera. Rafitra fametrahana laharan-tsafidy no ampiasaina amin'ny fifidianana, ka ilàna ny mpifidy mba hanome vato ny kandidà tsirairay milahatra araka ny safidiny. Zaraina ireo raha ilaina mandra-pahazon'ny kandidà iray ny vato be indrindra (50% + vato 1). Faharoa, tsy maintsy atao ny mifidy. Ny mpifidy izay tsy afaka mamonjy ny biraom-pifidianana amin'ny androm-pifidianana dia afaka mifidy mialoha na mifidy amin'ny alalan'ny paositra.
Manantena ny governemanta fa hanome tombony ho azy amin'ny fanisam-baton'ireo fifaninanana tery ny fifidianana amin'ny alalan'ny paositra. Tsy ny rehetra no resy lahatra:
Tsy nisy zavatra nandeha araka izay niheverana azy tamin'ity fifidianana ity nefa ny LNP mbola manantena ny fifidianana amin'ny alalan'ny paositra hanome tombony ho azy hatrany
Fifanarahana ara-politika  ataon'ny antoko afovoany-ankavanana’ ny fiaraha-mitantan'ny Liberaly-Nasionaly. Ny Antokon'ny Mpiasa Aostraliana, izay tarihan'i Bill Shorten amin'izao fotoana izao, no tena mpifanandrina aminy.
Tao anatin'ny andro vitsy mialoha ny androm-pifidianana, nanambara mialoha ny fandresena mazava ho an'ny fiaraha-mitantan'ny antoko Liberaly-Nasionaly ny ankamaroan'ireo mpaneho hevitra ara-politika sy ireo media mahazatra. Nanao antso ho amin'ny filaminana i Turnbull taorian'ny fifidianana Brexit tany Angletera hiala amin'ny Vondrona Eoropeana.
Nahatonga fandinihan-tena teo amin'ny Antoko Liberaly ny vokatra tsy nampoizina ary mety hisy hetsika manohitra ny fitarihan'i Turnbull. Ireo mpanao gazety ara-politika toa an'i Eliza Borrello dia efa mitanisa loharanom-baovao tsy fantatra anarana sahady momba ny tsy fahamarinan-toerana anatin'ny fiaraha-mitantana:
Mbola very hevitra aho ny amin'ny famaritana ny atao hoe fahamarinan-toerana
VAOVAO MAFANA avy amin'ny mpitahiry fomban-drazana: Raha manao fifanarahana hamadika anay ho an'ny tenany i @TurnbullMalcolm , dia afaka manova azy izahay amin'ny fivorian'ny antoko voalohany @abc  news
Niantso fandravàna roa i Turnbull, raha fifidianana ny loholona rehetra no miseho, fa tsy fifidianana ny antsasaky ny Antenimieran-doholona, tahaka ny mahazatra. Nifototra tany aminy ihany koa ny tetikadiny hanaisotra ireo antoko madinika sy tsy miankina tao. Afaka nahita ny lafiny mampihomehy amin'izany i Anthony Cooke:
BREAKING: Miomana haka ny sariny voalohany ny antenimieran-doholona Aostraliana vaovao.
Raha toa ka #miandryiAostralia  izay ho fanisam-bato farany sy ny voka-pifidianana, misy ireo reraka amin'ny mpitondra, taorian'ny fampielezan-kevitra lava tsy toy ny mahazatra, naharitra valo herinandro:
Angamba tsy mila miseho ireo mpitondra roa ireo mandra-pivoakan'ny vokatra. Heveriko fa hiatrika izany ny firenena.
Ho andro maromaro izany, raha tsy ho herinandro maromaro. Ampahafantarinay eo ihany ianareo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/07/18/84991/
 fanonganam-panjakana nataon'ny Antoko: http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/malcolm-turnbull-defeats-tony-abbott-in-liberal-leadership-spill-to-become-prime-minister-20150914-gjmhiu.html
 rafitr'i Westminster: https://en.wikipedia.org/wiki/Westminster_system
 Fifanarahana ara-politika: https://en.wikipedia.org/wiki/Coalition_(Australia)